Ndị a bụ agba nke Samsung Galaxy Note 9 | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ agba nke Samsung Galaxy Note 9
N'afọ a, anyị na-ahụ ụfọdụ asịrị dị mkpa na ntanye banyere ụdị ọhụụ nke ụlọ ọrụ South Korea na nke ahụ bụ a kwesiri igosi ihe nlere a n'August na ruo mgbe ebighi ebi gbanwere echiche nke smartphones dị ka ndị dị otú ahụ na-phablets, ee, na Cheta bụ n'etiti ndị mbụ na-efego a nnukwu ihuenyo.
Ihe anyị nwere n'ahịrị ndị a bụ ihe oyiyi enyoputara nke Samsung ọhụụ a agba agba ohuru iji tinye na Nkọwa 9. Mgbapu mmiri na-aga n'ihu ma taa anyị nwere ihe niile nkọwa dị na tebụl nke ọnụ ọhụụ ọhụrụ a.
Black Midnight, Lilac Purple, Silver na Blue
Obi abụọ adịghị ya, inwe ụdị dị iche iche na agba dị mma mgbe niile na Samsung doro anya banyere ya, ihe ngosi ọhụụ 9 na-agbakwunye nnukwu ụdị maka ụtọ niile. Iji gosipụta ihe na-agbanwe ọnọdụ nke ihe mmetụta mkpịsị aka nke ahụ dị n'okpuru igwefoto na nke ahụ nwere nchebe ga-enye ohere ịnweta onye ọrụ ka mma. Anyị enweghị ike ịtụ anya na ọtụtụ mgbanwe mara mma ebe ọ bụ na Nkọwa ndị a anaghị eme mgbanwe ndị a ma na-aga n'ihu na akara akara nke Galaxy S na ọrụ, na-ebutekarị na mmalite nke afọ na Mobile World Congress na Barcelona.
Ndị a bụ agba ọhụrụ ise anyị ga - eji hu nke a Rịba ama na - agbakwunye ihuenyo 6.4-inch super AMOLED nwere mkpebi QHD. Ihe ngosi ohuru ohuru a ga - agbakwunye ihe omuma ohuru nke Snapdragon 855 maka ufodu obodo na Samsung nke Exynos 9810 maka ndi ozo (nke anyi ji n’aka), o gha adi na ikike nchekwa 64GB, 128GB, ma ọ bụ 256GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ndị a bụ agba nke Samsung Galaxy Note 9
Sistemụ nchekwa ụlọ nke Ring na-aga ahịa maka $ 199